Tsy manafina ny Mate 9 vaovao intsony i Huawei ary mamoaka afisy mampiseho ny hafainganam-pandehany | Vaovao momba ny gadget
Tsy manafina ny Mate 9 vaovao intsony i Huawei ary mamoaka afisy mampiseho ny hafainganana
El Huawei Mate 9 Haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 3 Novambra amin'ny hetsika hataon'ilay mpanamboatra sinoa any Munich izy io, taorian'ny nanamafisana azy noho ny afisy navoakan'i Huawei tamin'ny alàlan'ny kaonty Weibo ofisialiny.
Taorian'ny tsaho maro momba ity fitaovana finday vaovao ity dia toa tsy miaraka amin'ny fandefasana azy manaraka intsony i Huawei izay hanana hery, fahombiazana ary ambonin'ny hafainganana rehetra. Araka ny hitantsika amin'ny afisy navoaka, dia hitantsika ny fomba fisehoan'ny fiara amin'ny hafainganam-pandeha tanteraka, izay mety hanondro ny hafainganan'ny fitaovana.
Azontsika atao koa ny mamaky ilay hafatra "Dingana mandroso", izay manondro ny fandrosoana kasain'ny Huawei amin'ny fandefasana ity smartphone ity, izay hahitana efijery 6-inch sy ilay processeur vaovao Kirin 960, izay ao ambadiky ny A10 an'ny Apple ihany.
Fantatsika ihany koa ny momba ny Huawei Mate 9 vaovao fa hanana 6GB RAM, fitehirizana anatiny hatramin'ny 256GB ary fakan-tsary izay Leica dia hanana andraikitra indray, izay tsy haintsika ankehitriny raha hijoro ho vavolombelona fotsiny izany tahaka ny nitranga tao amin'ny Huawei P9 sa handeha lavitra kokoa.
Amin'ny 3 Novambra dia hihaona amin'ny Huawei Mate 9 ihany isika amin'ny farany ary afaka mahafantatra isika raha toa ka hiaina mifanaraka amin'izay antenaintsika rehetra ary raha tena manolotra antsika ny hafainganana efa nampanantenain'i Huawei izao.
Heverinao ve fa hanaitra antsika Huawei miaraka amin'ny Huawei Mate 9 vaovao?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Tsy manafina ny Mate 9 vaovao intsony i Huawei ary mamoaka afisy mampiseho ny hafainganana
Xiaomi Mi VR, ilay solomaso virtoaly vaovao avy amin'ny mpanamboatra sinoa
Misy antso video izao ao amin'ny WhatsApp beta